5 sababood oo looga adkaaday Goodluck Jonathan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
5 sababood oo looga adkaaday Goodluck Jonathan
A warsame 1 April 2015
Abuja: Goodluck Jonathan waa madaxweynihii ugu horreeyay ee isagoo talada haya laga guulaystay.
Dadka reer Nigeria waxay la qabsadeen fikrada ah in mar walba uu guulaysto madaxweynaha xilka haya, marka la qabto doorashooyinka.
Milateriga Nigeria ayaa guulo ka soo hooyay kooxda Boko Xaraam, balse ma ahan weli wax ay ku qanci karaan Nigeriyiinta
Mucaaradka oo lixdii todobaad ka faa’iidaystay
Dhaqaalaha Nigeria waa uu kobcayaa balse dadku ma wada gaarsiisna
5. Wakhtigii isbadelka.
Muxammadu Buhari oo horkcaya mucaaradka ayaa ku baaqayay isbadel
Madaxweynaha la doortay ee Buhari ayaa haatan looga fadhiyaa in uu xaqiijiyo in dhab ahaantii uu isbadel keeni karo.
ISHA WARBIXINTA: BBC SOMALI
M. Xasan oo u hambalyeeyey dhigiisa cusub ee Nigeria
Matabaan: Maleeshiyo is hortaagtay ciidamada Jabuuti